कंगनालाई उर्मिला मातोंडकरको चुनौती, कंगनाले पनि दिइन् जवाफ ! :: Setopati
कंगनालाई उर्मिला मातोंडकरको चुनौती, कंगनाले पनि दिइन् जवाफ !
एजेन्सी मुम्बई, असोज १
बलिउड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरले कंगना रनावतलाई बलिउडमा लागुपदार्थ दुर्व्यसनीका नाम साझा गर्न चुनौती दिएकी छिन्।
कंगनाले केही समयअघि बलिउडका केही सेलेब्रेटीले लागुपदार्थ सेवन गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग गरेकी थिइन्।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार यसबारे उर्मिलाले प्रतिक्रिया दिँदै 'प्रायः अन्तर्वार्तामा कंगनालाई जो-कोहीसँग समस्या किन भइरहेको' भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन्।
कंगनालाई प्रश्न गर्दै उनले भनेकी छिन्, 'ती नामहरू कहाँ छन्? कंगनालाई अघि आएर ती नाम भनिदिएर हामी सबैको ठूलो भलाइ गरिदिन भन्न चाहन्छु। ती लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको नाम साझा गर्न म आग्रह गर्छु। म आफैं कंगनालाई थम्स अप गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछु।'
भारतीय पत्रिका इन्डिया टुडेको एक अन्तर्वातामा उनले भनेकी छिन्, 'तपाईं यदि निरन्तर 'भिक्टिम कार्ड' खेल्न चाहनुहुन्छ भने भनिरहनुस् कि म शिकार भएँ, शिकार भएँ, शिकार भएँ।'
उर्मिलाले आफ्नो टिप्पणी राख्दै थप भनेकी छन्, 'तपाईंले पाउनु भएको सबै कुरा- नाम, प्रसिद्धि र पैसा मुम्बई र बलिउड फिल्म क्षेत्रका कारण हो। तपाईंले यतिका वर्षमा किन यी विषयमा किन बोल्नु भएन? विगत केही महिनामा मात्र यी सबैबारे किन कुरा गरिरहनु भएको छ? अहिलेको समयमा यो हाँस्यास्पद देखिन्छ। सबै कुरा अलि बेकार हुँदै गएको देखिन्छ।'
कंगनाले रिपब्लिक टिभीमा एक अन्तर्वार्ता क्रममा '९९ प्रतिशत बलिउड सेलेब्रेटी ड्रग्स लिन्छन्' भन्ने दावी गरेकी थिइन्। उर्मिलाले हालसालै कंगनालाई मुम्बई र सम्पूर्ण फिल्म उद्योग सम्बन्धी आलोचना गरेकामा ‍निन्दा गरेकी थिइन्।
उर्मिलाले गरेको निन्दामा कंगनाले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
कंगनाले टाइम्स नाउको एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, 'उनी (उर्मिला) अभिनयका कारण त परिचित छैनन्। बरू 'सफ्ट पोर्न' का लागि परिचित छिन्। यदि उनले टिकट पाउन सक्छिन् भने म किन सक्षम छैन?'
यसअघि कंगनाको जया प्रदासँग पनि विवाद सुरू भइसकेको छ।
अर्नव गोस्वामीकोसहित दुई टेलिभिजनविरूद्ध एकसाथ उभियो बलिउड, दायर गर्‍यो मुद्धा